Nahena ho 20 taona ny sazin’i Sayed Pervez Kambakhsh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Janoary 2019 3:51 GMT
Farafaharatsiny aloha mba tsy fanamelohana ho faty :
Nofoanan'ny fitsarana avo Afghana ny fanamelohana ho faty ho an'ilay mpianatry ny asa fanaovan-gazety izay voampanga ho nanao fanevatevana noho ny fametrahana fanontaniana tao am-pianarana momba ny zon'ny vehivavy eo ambanin'ny finoana Islamo. Saingy mbola nanameloka azy hisazy 20 taona an-tranomaizina ireo mpitsara.
Nanamarika ny fironan'i Afghanistana mankany amin'ny fomba fijery tena mpandala ny nentin-drazana hiringiriny momba ny finoana sy ny fahalalahana ho an'ny tsirairay ny raharaha hanenjehana an'i Parwez Kambakhsh, 24 taona, izay nanana rahalahy nampahatezitra ny andriamanitry ny ady Afghana tamin'ny alàlan'ny asa soratra nataony.
Farafahakeliny olona iray nijoro vavolombelona no nilaza fa norahonana izy tamin'ny fijoroana vavolombelona sandoka manohitra an'i Kambakhsh tamin'ny fitsarana voalohany tamin'ny volana Janoary 2008. Amin'izao fotoana izao (Oktobra 2008), i Kambakhsh, 24 taona, dia handany 20 taona ao amin'ny fonja malaza ratsin'i Pul-i Charkhi noho ny heloka bevava “nanontany momba ny finoana Islamo”.
Ny fonja Pul-i Charkhi, eo atsinanan'i Kabul ao amin'ny Google Map ato
Notantaraina teto amin'ny Global Voices [mg] sy Global Voices Advocacy teo aloha ny raharahan'i Kambakhsh .